Ukuze uthole ukuhlolwa kangcono, yebo, uzilungiselele. Nokho, ungenza ngaphandle kwalo. Kuyaziwa ukuthi yesimanje kanye indlwana unganikela kufika ku-85% impumelelo. Zenze - umsebenzi ofanayo, it is a uhlobo belungiselela ukuhlolwa. Abanye abafundi ngisho kangcono ukukhumbula isihloko ukukhiqizwa amathiphu ezinjalo. Ngaphambi indlela yokukwenza cribs, kubalulekile ukuba bazikhethela indlela. Bangakwazi lilotshwe indlela endala, ephepheni noma ngekhompyutha ukuba. Inketho yokugcina linwetshelwe sibonga ukuthandwa Smartphones, e-izincwadi kanye namanye amadivayisi zobuchwepheshe.
Ukukopela amashidi ifoni namuhla - omunye okuvame kakhulu, kodwa ngokuqinile "Ukudalulwa". uthisha Elementary Ungakhubaza noma yimaphi amadivaysi eklasini. Inguqulo elula saloluhlobo cribs kungenziwa nge e-book encane. Into esemqoka lapha kutsi thishela abazange bakuqaphele yini esolisayo. Inqubo aphansi: e-ncwadi okhandwe ngesando ulwazi olulungile, okungase kalula inhloli. Yaziwa cribs usebenzisa ama-headphone. Kungcono ukuthatha-earphone encane impela ukuba ongabonakali kusukela ngaphandle. idivayisi okunjalo isendalini futhi odingeka phakathi abafundi. Ulwazi oluqukethwe kuleli cala kusidlali. Impendulo ngayinye, kukhona into yemenyu ekhethekile ohlwini lwadlalwayo. Ukuze usebenzise leli shidi ukukopela, wena nje nokuzala oyifunayo inombolo ithikithi. Ungakwazi ukuxoxa nomngane, futhi siyofeza eyodwa yezindlela ukulethwa. Kuphakathi imiyalezo noma bizo. Kodwa ukuthutha lubonakale kakhulu ngaphandle.
Indlela cribs, uma ukusetshenziswa kwezindlela zobuchwepheshe obuphambili etholakalayo? Ukuze wenze lokhu, zikhona izindlela ezindala, ayesetshenziselwa kwekhulu leminyaka elidlule. Ngokwesibonelo, kukhona izinhlobonhlobo eziningi iphepha cribs. Omunye wabo - kukhona izimpendulo eyayibhalwe emakhasini ephepheni elihlukile. Ukuze usebenzise lesi simiso, kubalulekile ukwazi ukuthi iyiphi iphepha kuyoba phezu ukuhlolwa. Nokho, uma noma iyiphi ishidi. Ngokuhamba kwezidingo, ungakwazi ngaphandle komzamo esikhundleni ishidi ohlanzekile lephepha embozwe lokubhala. Qaphela ukuthi kwezinye izimo baphathe isitaki samaphepha akunakwenzeka. Ngempela, ngezinye izikhathi uthisha othatha ukuhlolwa, uvimbela ukuthatha izikhwama kanye nezikhwama.
Ngaphambi kokubhala ishidi ukukopela, ngaso sonke isikhathi kufanele abale zonke kungenzeka i-force majeure. It zingenziwa encane kakhulu futhi inothi. Indlela ukukopela amashidi toilet paper, ungazi konke, futhi nangu kanjani ukwakha mini-book ngezimpendulo, bheka, cishe abaningi. Ingqikithi le ndlela ukuthi angaluboni noma iyiphi indawo evumelana. Futhi iphepha yangasese ngokuvamile lisetshenziselwa, okungenani, sengathi like ethoyilethi. Indlela cribs, uma ngaphambi uthisha ukuhlolwa "sadist" amabutho ukuthi baphume emaphaketheni akhe? Kulokhu, kuyafaneleka ukukhumbula indlela endala esikoleni, lapho izimpendulo yayibhalwe izingxenye ezihlukahlukene zomzimba. Kuyinto kudingekile kuphela ukwazi ukuthi ukwaziswa okuningi kakhulu ningathwali.
Dala amathiphu kangcono kwi kunzima kakhulu ukukhumbula amathikithi. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi impendulo ngokuphindaphindiwe ilele ngekhanda njengoba yakhe noma ukufundisa. Le ndlela ngabe inciphise iphepha noma idivayisi electronic inkumbulo. Ngaphambi kokwenza cribs, ungakwazi uthintane nalabo kakade wathatha ukuhlolwa uthisha esithile. Lokhu kuzokwenza ukunikeza ulwazi oludingekayo ngalokho imithetho kuyoba sokunikela. Ngalinye ngokuvamile has uhlelo ayo ukuhlolwa, izivivinyo. Kukhona amasu amaningi akuvumela lutho ukufundisa ngaphambi kweseshini. Kodwa udinga ukuzisebenzisa ngokuhlakanipha futhi ngokulinganisela. Noma kunjalo, ezinye izinto zingcono bafunde, ngoba singaba usizo kabi empilweni.
Injani ukuhlaziywa sifundo
Imisebenzi ulwelwesi plasma yeseli
"Smart" kagesi ikhofi machine Delonghi Magnifica. umsizi eyingqayizivele
Niacin: izinwele umonakalo. Niacin Izinwele: inzuzo noma umonakalo?